Ny telefaona Cyrcle no finday Android hafahafa indrindra hitanay | Androidsis
Ny Cyrcle Phone no finday Android tsy fahita indrindra izay hitanao tamin'ny fiainanao
Amin'ity teknolojia ity dia tsy hitsahatra ny hahagaga ny tenanay sy ny momba anay bebe kokoa izahay filokana toy ny Cyrcle Phone, izay azontsika antsoina manomboka izao ho finday Android tsy fahita firy izay hitantsika teo amin'ny fiainantsika.
Araka ny anarany, telefaonina boribory izy io izay mampiavaka an'i manana audiojack 2 (? ¿). Azonao atao ny mahazo ny fahatairanay satria ny anao dia ho hitanao ny endrika boribory sy fisaka an'ity finday ity miaraka amina output audiojack roa.
Mbola manandrana mahatakatra ny anton'izany izahay asio famoahana audiojack roa, ary bebe kokoa rehefa miatrika fifandraisana izay very tsikelikely manoloana ny fironana feo vaovao amin'ny alàlan'ny USB type-c.
Ity finday ity dia noforonina tamin'ny fanombohana nanomboka ny taona 2015 ary toa ity taona ity no hitondran'izy ireo izany any an-tsena. Ny anton'ny fisian'ireo fifandraisana audiojack roa ireo satria ny millenian Matetika izy ireo dia mampiasa fifandraisana roa mba hizara ny atiny mozika na haino aman-jery izay lalaovin'izy ireo. Raha jerena toy izany dia toa tsy dia hevitra ratsy loatra ...
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia ny fakan-tsary eo aloha eo an-tampony ary inona no mandeha amin'ireo selfie ireo? Finday iray tsy dia fahita firy izay saika azonay ampiasaina ho famantaranandro latabatra ho an'ny latabatra kelinay, satria toa izany.
Ny marina dia mbola ho gaga hatrany isika ho an'ny habetsaky ny hevitra mipoitra amin'ny fanombohana sasany sy ny fomba fiezahan'izy ireo handefa vokatra izay mety mifanaraka amin'ny fomba sasany amin'ny sehatry ny tsena; raha nisy iray ho an'ny telefaona toy izany.
El Hita tao amin'ny CES 2020 i Cyrcle Phone ary io dia iray amin'ireo fitaovana tsy fahita firy hitantsika nandalo an'ireto andalana ireto. Ho hitantsika izao raha afaka mahita ny mazava izy indray andro any ary manaporofo izany ny fananana telefaona boribory entina ao am-paosintsika. Avelanay ianao fitendry hexagonal ity ho an'ny fomba fanoratana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Cyrcle Phone no finday Android tsy fahita indrindra izay hitanao tamin'ny fiainanao
Ny telefaona Huawei rehetra izay hahazo Android 10 (amin'izao fotoana izao)